MM Hackers Uniteam - Home | Facebook
11,112 people like this
11,086 people follow this
Page created - August 5, 2012
UG MM Market
PagesOtherBrandWebsiteComputers & Internet WebsiteMM Hackers Uniteam
MM Hackers Uniteam
MHU ဟာ Government Hacker မဟုတ်သလို Anti-Government Hacker လည်း မဟုတ်ပါဘူး ... Team M|H|U ဟာ Myanmar Hacking Group ပါ ... Myanmar ဆိုတဲ့ နိူင်ငံအတွက်ပဲ ရပ်တည်ပါတယ် ... အရင်ကတည်းကလည်း အမိမြန်မာနိူင်ငံဖက်ကနေ အမျိုး / ဘာသာ / သာသနာအတွက် တစိုက်မတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ် ...
အခုလည်း ရပ်တည်နေဆဲပါပဲ ... နောင်လည်း ဆက်လက် ရပ်တည်သွားမှာပါ ...
Team M|H|U ဟာ 2015 ခုနှစ် ၇ လပိုင်းအတွင်းမှာ MHU Facebook Page ကနေပြီးတော့ Officially Announced လုပ်ပြီးတော့ M|H|U ရဲ့ 2nd Generation အတွက် O...fficially Recruit ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ် ... 2nd Generation New Crew တွေကို စိတ်ကြိုက် မေးမြန်းရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့ 2015 ၈ လပိုင်းအတွင်းမှာ
M|H|U 1st Generation brother တွေဟာ Private Forum / Private Group / Private Channel အားလုံးကို 2nd Gen ကို လက်လွဲပြီး Underground လောကကနေ Retired လုပ်သွားခဲ့ကြပါပြီ ... အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာလည်း MHU Facebook Page ရဲ့ Message Box ကနေ Crew အဖြစ် လက်ခံပေးဖို့ ထပ်မံတောင်းဆိုမှုတွေလည်း ရှိတဲ့အတွက် လိုအပ်သလို စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး
2nd Gen New Crew တွေ အဖြစ် နောက်ထပ် ၅ ယောက်ကို ထပ်ပြီး လက်ခံခဲ့ပါတယ် ... အဲဒီ ၅ ယောက်အပါအ၀င် ယခုလက်ရှိ MHU 2nd Generation ရဲ့ Crew List ကို Final Update လုပ်တဲ့အခါမှာ တရားဝင်အားလုံးပေါင်း ၂၅ ယောက် ရှိပါတယ် ...
List နဲ့ ပြရရင်တော့ ...
တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ..
MHU ဟာ 1st Generation brother တို့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ကနေ ယခုလက်ရှိ 2nd Generation ၂၀၁၆ အချိန်ထိ ကို အမျိုးသားရေး ဦးစားပေးပြီး နိူင်ငံချင်း ယှဉ်လာတဲ့ Cyber War အဆင့်တွေမှာပဲ ထိပ်ဆုံးကနေ active ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ...
ယခုလည်း ဖြစ်နေဆဲပါ ... နောင် ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း Myanmar Cyber Space ကို ထိပ်ဆုံးကနေ ကာကွယ်နေဖို့အတွက် အမြဲတမ်း အသင့် ရှိနေမှာပါ ...
MHU သည် နောက်နောင်ကို နိူင်ငံအဆင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ Cyber War မှ လွဲပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေ ဘာကိစ္စကိုမှ ၀င်ရောက်ပတ်သက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ...
နောက်ပြီး မြန်မာလူငယ်များအတွက်လည်း အကြောင်းသင့်ရင် သင့်သလို Cyber Security ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကို လည်း ဒီ Page ကနေတစ်ဆင့် Sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ် ဆိုတာကိုလည်း အသိပေး ပြောကြားလိုပါတယ် .. ... ;)
We are Hacktivists for Political Outcomes & Justics for What we've Lost .
Security Tested To Our Neighbour Country Army Site :P !
February 2, 2016 · Yangon, Myanmar ·
Long time no see . who are watching MHU? :)
Hacked - http://www.loadcellthai.com/images/
Hacked by Team MHU